Air Canada hisidina mankany St Vincent sy Grenadines
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Canada hisidina mankany St Vincent sy Grenadines
Enga anie 5, 2017
Air Canada androany dia nanambara an'i St.Vincent sy ny Grenadines ho iray amin'ireo lalam-baovao enina ho an'ny vanim-potoanan'ny ririnina.
Araka ny filazan'i Benjamin Smith, filoham-pirenena, Passenger Airlines ao amin'ny Air Canada dia namoaka ny “Air Canada dia manohy ny fanitarana stratejika sy manerantany miaraka amina làlana maro tsy miato izay tsy mitsahatra amin'ity ririnina ity mankany Aostralia, Amerika atsimo, Karaiba ary Etazonia,”. Nilaza ny zotram-pitaterana an'habakabaka fa ny serivisy iraisampirenena hatokana ho an'i St.Vincent sy ny Grenadines ary ireo toeran-kaleha dimy hafa dia "manolotra safidy vaovao ho an'ireo mpandeha mitady handositra ny ririnina kanadiana".
Tale jeneralin'ny St.Vincent sy ny Grenadines Authority ofisialy, Glen Beache dia naneho ny hafaliany tamin'ny fanambarana izay nilaza fa "faly izahay mandray ny seranam-piaramanidina toa an'i Air Canada izay manana tantara manan-karena, ho an'i St.Vincent sy Grenadines. Manantena ny fiaraha-miasa mahomby izay ahafahan'ny roa tonta mitombo. ”
Ny fanambarana avy amin'ny Air Canada dia tonga rehefa nanohy ny fikatsahany ny hisarika ireo mpitatitra iraisam-pirenena ho any amin'ny Argyle International Airport (AIA) izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 14 febroary 2017. Ny AIA dia mirehareha 2,743 metatra (9,000). dian-tongotra), 45 metatra (150 metatra) ny sakany ary natao handraisana fiaramanidina lehibe tahaka ny Boeing 747-400s. Ny tranobe terminal 171,000 1.5 metatra toradroa dia natao hitantanana mpandeha XNUMX tapitrisa isan-taona, mihoatra ny avo dimy heny noho ny fahaiza-manao ao amin'ny ET Joshua. Ny AIA dia nohatsaraina bebe kokoa amin'ny tetezana jet, efitrano fatoriana, trano fisakafoanana, fisotroana ary fivarotana hafa, natao hametrahana traikefa amin'ny mpandeha rehetra mifanaraka amin'ny fenitra iraisampirenena.
Ny fizahantany no mpamatsy vola lehibe indrindra an'i St.Vincent sy ny Grenadines tao anatin'ny telopolo taona lasa ary antenaina hampiakatra ny vola miditra amin'ity sehatra ity ny seranam-piaramanidina iraisampirenena. Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Argyle dia antenaina ihany koa hampitombo ny fahazoana mankamin'ity nosy maro ity, hisarika sidina mivantana avy any Amerika Avaratra sy Eropa.
Ny indostrian'ny fizahantany dia namporisihina hanaiky ny #FacesofTravel an'i Hawaii
Lufthansa dia manolotra vokatra tsara hafa amin'ny fivoriana fanao isan-taona
53 minitra lasa izay
Ny fizahan-tany Jamaica dia mankalaza ny loka 2021 TripAdvisor